Kooxo hubeesan oo nin dhalinyara ah dil ugu geestay degmada wadajir ee gobalaka banaadir – STAR FM SOMALIA
Kooxo hubaysan ayaa goor dhaweyd waxa ay Xaafada Nasteexo ee Degmada Wadajir ku dileen Wiil dhalinyaro ah oo ka shaqeynaayay Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde, horayna uga soo shaqeeyay Wasaarada Amniga Dowladda Federalka Somaliya.
Dilkaan ayaa waxaa fuliyay rag ku hubaysan Bistoolado kuwaasi oo rasaas la dhacay Ciise Beyle oo ka mid ahaa Shaqaalaha Garoonka Aadan Cadde.
Ciise Beyle, ayaa xilliga falka dilkiisa uu dhacaayay, wuxuu ku wajahnaa goobtiisa shaqada hayeeshe, rag hubaysan ayaa rasaas la dhacay, taasi oo keentay in durba meesha uu ku naf baxo.
Raggii hubaysnaa ee dilka geystay ayaa sidii caadada aheyd waxa ay ka baxsadeen goobtii ay ku dileen Ciise Beyle.
Xaafada Nasteexo ee Degmada Wadajir ayaa noqotay goobta ugu badan ee lagu beegsado dadka la shaqeeya Wasaaradaha Xukuumadda, iyadoo xaafadan dhowr mar lagu dilay Shaqaalo ka shaqeeya Wasaaradaha Dowladda Somaliya.
Dilalka dhalinyarada waxbaratay ee Dowladda u shaqeysa ayaa ku soo badanaya Magaalada Muqdisho, iyadoo tani muujinaysa sida uu u sii xumaanayo ammaanka Magaalada Muqdisho.
Biloowgii Bishan ayeey aheyd markii Degmada Wadajir lagu dilay Wiil uu adeer u yahay Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ruux la socday oo rag hubaysan ay rasaas huwiyeen.